Foomamka isku dhafan ee Salesforce oo ay ku jiraan Foomka | Martech Zone
Talaado, September 8, 2009 Isniin, Janaayo 1, 2018 Douglas Karr
Haddii aad waligaa horumar ku sameysid 'Salesforce API', waad ogtahay sida ay u adag tahay is laakiin daruuri maahan sida ay u fududahay. Web-To-Leads iyo Web-To-Xiriirada ma ahan wax aad u adag, laakiin wali waxay kaa baahan tahay inaad ku kobciso foomamkaaga shabakada gacanta. Kudos ku Qalabaynta sii deynta ugu dambeysa, oo bixisa Isdhexgalka Salesforce fudud!
Tags: foomamkaxirmoisdhexgalka formstackiibinfoomamka iibkaisdhexgalka iibka
Sep 9, 2009 at 1: 39 PM
Mahadsanid Doug! Waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyn tan diyaarinno oo aan bilowno.